पछिल्लो समय बैंकिङ जागीरमा आकर्षण बढिरहेको छ । फलस्वरुप, व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या बढेको छ । यसले बैंकिङ जागीरमा प्रतिष्पर्धा बढाएको छ । त्यसमाथि सर्टिफिकेटकै भरमा बैंकमा जागीर पाउँछु भन्ने विद्यार्थीहरुको सोचाईका कारण उनीहरु बेरोजगार नै बस्नुपरेको छ …
पूर्वाधार विकास बैंकले कहाँकहाँ लगानी गर्छ ?
सडकदेखि पुल निर्माणसम्मको काममा लगानी गर्नका लागि छिटै नै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना हुने भएको छ । बैंकका संचालनको अनुमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक अबको छ महिनाभित्रमा संचालनमा आइसक्ने इमर्जिङ नेपालका सीईओ डा. विनोद आत्रेयले …
लगानीकर्तामा मुद्रास्फीतिको प्रभाव
सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने समग्र वस्तु र सेवाहरूको औसत मूल्यस्तरमा निरन्तर भएको मूल्यवृद्धिको अवस्था मुद्रास्फीति हो । यसको मतलब केही वस्तु वा सेवाको मात्र मूल्यवृद्धि भएमा त्यसलाई मुद्रास्फीति भनिँदैन । यसका लागि समग्र मूल्यस्तरमा वृद्धि भएको हुनुपर्छ । केहीको मूल्य घटे …
तपाईँलाई थाहा छ ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महशुल घरमै बसी बसी बुझाउन सकिन्छ नि । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केही साता अघिदेखि नै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनलाइन प्रणालीबाट सहजैरुपमा महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुरुप …
सुबोध पोखरेल । सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ सस्था, व्यक्तिहरुबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र सस्थाहरुबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्धारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको …
मोबाइलबाट कसरी भुक्तानी गर्ने विजुली, पानी र स्कुल फी ?
भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरि लिइएको रकम कर्जा वा ऋण हो । सामान्यतयाः ऋण प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने गर्दछ भने कर्जामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्याभुती पनि पर्ने गर्दछ । बैंकहरुले संकलित निक्षेप तथा पुँजी बिभिन्न क्षेत्रमा अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा …
व्याजदर करिडोर : सामान्यअर्थमा भन्नुपर्दा व्याजको न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा नै व्याजदर करिडोर हो । करिडोर लागू भएपछि कुनै निश्चित सीमाभन्दा माथि र तल व्याजदर जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । व्याजदरमा स्थायित्व हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि स्थायीत्व कायम रहन्छ । नेपालमा …
नेपाल राष्ट्र बैंक के हो ? हेर्नुस् राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यहरु
बैंकिङ खबर / खर्च गर्दा पूर्वयोजना बनाएर बजेट तय गरी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरता भन्नु पैसाले कसरी, कति र के काम गर्छ भनी बुझ्न सक्ने हुनु हो । वित्तीय साक्षरताको अभावमा व्यक्तिले परिवार व्यवस्थापन तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा कमजोर …
बैंकबाट ऋण निकाल्नु पर्यो, के छन् प्रावधानहरु ? (हेर्नुस् विस्तृतमा)
डेबिट कार्ड के हो ? क्रेडिट कार्ड के हो ? हेर्नुस् भिन्नताहरु
क्रेडिट कार्ड : क्रेडिट कार्डलाई भुक्तानी कार्डका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । ग्राहकले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेपछि क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी दिन सक्छ । यो कार्ड भएको व्यक्तिले निश्चित रकमसम्मको वस्तु वा सेवा उधारोमा खरिद गर्न सक्छ । ‘अहिले खर्च …
स्वीस बैंकको भित्रि रहस्य के ? किन लुकाईन्छ कालो धन ?
आरपी पौडेल, रुपा कोइराला / स्विजरल्याण्डका बैंकले दिने ब्याज जम्मा १ दशमलव ७ प्रतिशतको अनुपातमा रहेको छ । यो समयको बिचमा एकताका हाल सम्मकै सबैभन्दा बढि ब्याज अर्थात् ३ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र दिएको थियो । तर पनि संसारका धनाढ्यहरुले …
डेबिट कार्ड के हो ? कसरी प्रयोग गर्ने ?
] डेबिट कार्ड : बैंक कार्ड वा चेक कार्ड भनेर पनि चिनिने डेबिट कार्ड एकप्रकारको प्लास्टिक कार्ड हो । यसको प्रयोग गरेर एटिएम (अटोमेटेड टेलर मेसिन) बाट नगद निकाल्न र वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा यसको माध्यमबाट भुक्तानी दिन सकिन्छ । त्यसैले …